Windows - MYSTERY ZILLION
January 2008 edited April 2008 in Windows XP
ထွက်လာလိုက်တဲ့ Windows တွေ စုံနေတာပါပဲ။ MZ ရဲ့ အဖွဲ့သားများကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ... အားလုံးကို လေးစားလျက်ပါ....
1.Windows xp black (DVD)
2.Windows xp essential SP2 December 2007 update...
3.Gold 2008 စတဲ့
Windows နဲ့ပတ်သက်ပြီး သုံးစွဲခဲ့စဉ်က အဆင်မပြေမူများ... ၊ ကောင်းတဲ့အချက်များ...၊
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှာ တွေ့ရတက်ဖြစ်စဉ်များ ကူညီရေးသားပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပါတယ်...
ဒီနောက် Windows XP SP3 (microsoft) ကို လက်ရှိသုံးစွဲနေကြပြီးလား၊ ဖြစ်နိုင်ရင် Vista အကြောင်းပါ ရေးပေးကြပါ အားလုံးကို စောင့်မျှောက်ကြိုဆိုနေပါတယ်.... ချစ်စွာသော icefirester
February 2008 edited February 2008 Administrators
ထွက်လိုက်တဲ့ windows xp တွေက တစ်ပုံကြီး။ အခု ၃ ခွေဆိုတာတောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ရထားလို့။ download ဆွဲလို့ရတာတွေ တစ်ပုံကြီး ။ သူ့ဟာနဲ့ သူတော့ ဟုတ်နေတာပဲလို့ဆိုလို့ရမှာပေါ့ :P ။ Windows XP SP3 ကို MS က ထုတ်လိုက်ပြီလား။ သိတောင် မသိလိုက်ဘူး။ Vista ပဲ သုံးနေတာဆိုတော့ ( ကြွားလိုက်တာ ) XP အကြောင်းတောင် သတိမထားမိဘူး။ Vista SP1 ကတော့ အခုထက်ထိ full မထွက်သေးဘူး။ နည်းနည်းလေးစောင့်ရအုံးမယ်။ Crack ကတော့ SP1 beta အတွက်တောင် ထွက်ပြီ။ full ဆိုလည်း ထွက်လာအုံးမှာပဲ :67: ။ Vista ကတော့ Memory 1 GB , CPU က အနည်းဆုံး 3.0 ဆိုလုံးဝ OK။ dual core တို့ core2dual တို့ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့။
ဟုတ်ပြီကိုစေရေ...dual core တို ့core2dual ဆိုတာဘာပါလဲ...အဲဒီကောင်တွေပါရင်ကွန်ပြ ုတာကဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင် ့သွားတာလဲဗျာ:33:
cache ကွာတယ်လို့ ထင်တာပဲ။core2dual က cache ပိုများတယ်။ တခြားသိတဲ့လူတွေ ဖြေပေးပါအုံးဗျ
Dual core and Core2 Dual တွေက Penium4 တွေနောက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ Processor တွေပါ Processor တွေစွမ်းရည်မြင့်လာလေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေ ပိုကောင်းလာမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ processor တွေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် တခြား
အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ တပ်ဆင်ပေးမှ လုပ်ဆောင်မှု အပြည့်အ၀ ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
မိတ်ဆွေကအသစ်လေးထင်ပါရဲ ့..:Pကျနော်က ko-editပါ.....ဒီဖိုရမ်ရဲ ့မေးခွန်းအထူဆုံးသူတွေထဲမှာကျနော်လည်းပါတယ်...ခုလိုဖြေပေးတဲ ့အတွက်..ကျေးဇူးပါ
ဟုတ်ကဲ့.. အသစ်လေးပါ..:D:68: မေးချင်တာမေးပါ...ဖြေ ချင်တာတွေ ဖြေပါမယ် :P
Nice to meet you Ko edit
ဘာတွေကွာလည်းဆိုတော့ အတိုချုံးလိုက်ရင် ဒါလေးတွေကွာပါတယ်၊ cache 12MBအထိပါတာ ကွာပါတယ်၊Core ကွာပါတယ်၊transistor ပါ၀င်မူကွာပါတယ်၊FSB ကွာပါတယ်၊
အကြိုက်ဆုံးကတော့ nero CPU Fan တလုံးအလကားရတာပါပဲ။ဟဲဟဲ ကိုယ့်ဘာသာ၀ယ်ရင်
၈သောင်း၉သောင်းလောက်ကုန်မှာ၊ အလကားရတော့ Core CPU တွေကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
လာပြီဟေ့.... Windows XP black v.5 (DVD) အဆွေတော်ကြီးများ သုံးနေကြလား
ကျွန်တော်ကတော့ XP သုံးနေတဲ့သူအားလုံးကို MS က Windows XP SP3 ကို သုံးစေခြင်းတယ်....
အကောင်းဆုံးအချက်က KB တွေပါ၀င်လာတယ်....
ဖြစ်နိုင်ရင် office 2003 SP3 ကို update လုပ်စေခြင်းတယ်...
office 2007 SP1 လဲ ထိုအတူပဲ....ပိုပြီး မြန်လာတယ်...
CS အုပ်စုနဲ့တွဲဘက်သုံးတဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေလာတယ်...
ူlinks လုပ်သုံးစွဲနေတဲ့သူတွေအတွက် အများကြီးကောင်းတယ်....
ကလေးတဘက်။ အစည်းအေ၀းတွေတဘက်နဲ့။ အီးမေးလ်တောင် မတက်ဖြစ်သလောက်ဘဲ။ နားလည်ပေးကြပါဗျာ။ နောက်ထပ် 21 ရက်နေ့တုန်းက ကျနော့်အလုပ်က စက်တချို့ (၈လုံး) ဟက်ပီးဘတ်ဒေး ထိသွားတာ ... ပြန်ပြင်နေရတာနဲ့ အခု ဒီနေ့မှဘဲ ပြီးသလောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါတောင်မှ တလုံးကျန်သေးတယ်။ ထားပါလေ။
အခုက အကူအညီတခုတောင်းချင်လို့ပါ။ ကျနော့်မိတ်ဆွေတယောက်က တရုတ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့စက်ကို တရုတ်လိုအားလုံးမြင်ချင်လို့တဲ့။ အဲဒါ Multi User Interface တခုလိုနေတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ ကျနော်ဘဲရှာမတွေ့လို့လားမသိဘူး။ Evaluation version ဘဲတွေ့တယ်။ သယ်ရင်းတို့တယောက်ယောက်ဆီမှာများရှိရင် အမြန်လေးတင်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျား။ အခုလိုချင်တာက Chinese (PRC) ရော၊ Chinese (Taiwan) နှစ်ခုလုံးပါ။
original windows က XP English version လား?
မင်္ဂလာပါ... ကို Zulu မတွေ့တာ တော်တော်ကြာနေပြီ
Active CD ဆိုင်မှာ နိုင်ငံပေါင်း 124 နိုင်ငံအတွက်
Multi User Interface တွေပါတဲ့ CD တစ်ချပ် တွေ့ဘူးတယ်...
ဒါနဲ့ ဟက်ပီးဘတ်ဒေး ပြဿနာဖြေရှင်းပုံလေး သင်ပေးပါအုံး၊
ကိုမာ့ခ် ... ၀င်းဒိုးစ်က Eng ver: (XP SP2) ပါ။ အခုလိုနေတာက MUI ပါ။ Chinese interface ထားချင်တာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရှာတွေ့ရင် အမြန်လေးကူညီပါ။
ကျနော်က ရန်ကုန်/မန်းလေးမှာ ဟုတ်ဘူးဗျ။ ေ၀းတယ်။ ဆိုတော့ကာ ရနိုင်ရင်တော့ တနေရာရာကနေ တင်ပေးပါလား။ iso file ပေါ့လေ။ rapidshare, mediafire ဘယ်ကဖြစ်ဖြစ် အိုကေပါတယ်။
ဟက်ပီးဘာ့ဒ်ဒေးအတွက် ဖြေထားပြီးပါပြီ။ ဟိုဘက် ဗိုင်းရပ်စ်နေရာမှာပါ။ ဒီကသွားလို့ရပါတယ်။ ဒက်စ်တော့ကွန်ပြူတာအတွက်ဘဲ အဆင်ပြေဦးမယ်။ လက်ပ်တော့ကတော့ ဒီနေ့မှ ပြန်ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်။ ကျနော့်ဆီမှာ NTLDR missing Laptop ၂လုံးကျန်နေသေးတာ မကိုင်ရသေးဘူး။
MUI လိုချင်ရင် လွယ့်ပါ့ဗျာ.. windows update လုပ်လိုက်လေ.. အဲမှာ langauge pack ကိုရွေးပြီး update လုပ်လိုက်.. ဒါဆို MUI သွင်းပေးလိမ့်မယ်.. ပြီးရင် control panel မှာ regional/language ဆိုတာ ရှိတယ်.. အဲဒီမှာပြောင်းလိုက်ရုံပဲ.. အားလုံး OK သွားမယ်.. (စမ်းတော့ မစမ်းဘူးပါ )
သူငယ်ချင်းဆာဗာမှာ ခန တင်ထားပေးတယ်။
တတ်နိုင်ရင် အမြန်ယူပေးပါ။ သူ့ကွန်ပျူတာ ပိတ်ထားရင်ရမှာမဟုတ်လို့။
MUI , Chinese Traditional နဲ့ Simplified ပါတယ်။
Yes, Windows XP SP3 is not including Outlook Express. But My installer is include Office 2003.
၀င်းဒိုး ဆာဗစ်ပတ် (၃)က Outlook Express မပါပါဘူး။ သူ့ထဲမှာ Office 2003 Build In ပါလို့မလိုဘူးလို့ယူဆတင်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Outlook Express နဲ့ Microsoft Outlook နဲ့ က အကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးလေ... စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့နော်။
စာကြွင်း ---- မွေးစကလေးမို့ စကားမပြန်ပဲတော့မနေကြပါနဲ့နော်။ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ပေးပါ။
Golden Moon wrote: »
အဲ.. အဲဒါက Microsoft SP3 မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်... ပြန်ပြင်ထားတဲ့ အခွေနဲ့ တူတယ်.. ကားပုံကြီးနဲ့လေ.. ကျွန်တော်က windows တင်တိုင်းအဲဒီအခွေပဲ သုံးတယ်.. software သွင်းရတာ အရမ်းသက်သာတယ်..
ကျေးဇူးပါ ကိုမာ့ခ်၊ ကိုစေတန် နဲ့ အားလုံးကိုပေါ့လေ။
အခုတော့ အိုကေသွားပြီထင်တယ်။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်နေတာ ပြီးတော့မပြီးသေးဘူး။
ဒီမှာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးမှဘဲ သူ့စက်မှာသွား အင်စတောတော့မယ်။ ကိုယ်ပိုင်စက်မဟုတ်ဘဲ သူငယ်ချင်းရဲ့ အလုပ်ရှင်စက်ဆိုတော့ သွားစမ်းတာမျိုးမလုပ်ချင်လို့ပါ။
ချိုင်းနိအမ်ယူအိုင် အိုကေပြီးနောက်မှာ နောက်တမျိုးဗျာ ...
တမျိုးပြီးတမျိုး မရိုးတဲ့မိုးမိုးနော ...
ဘော်ဘော်တယောက်ရဲ့စက်ဗျ။ ၀င်းဒိုးစ် XP SP2 ပါဘဲ။ Sound မရလို့။
Device Manager screenshoot တင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအ၀ါပြနေတဲ့ Audio Device on ... ဆိုတာကို update လုပ်လည်း wizard box ပေါ်မလာဘူးဗျ။
အဲဒီစက်အတွက် Everest Home ရီပို့ကိုတော့ ဘယ်မှာတင်ရမယ်မသိလို့ PM နဲ့ဘဲပို့လိုက်တော့မယ်။
DriverMagic, Driver Genius, My Drivers, Everest Home စုံသွားတာဘဲ။ မအိုကေသေးဘူးဗျာ။
on board sound card လားဗျ။
on board ပါ
Everest Home report ကို အခုတင်ပေးမလို့ဟာ PM ဘယ်နားရောက်နေလဲဗျ။ မတွေ့ဘူး။
on board ဆိုရင် motherboard နာမည်နဲ့ အင်တာနက်ထဲမှာရှာလိုက်ရင် ဒေါင်းလုပ်ရသင့်တယ်ဗျ။
motherboard နာမည်သေချာသိလား ဥပမာ
MSI 945G စသဖြင့်ပေါ့။
အော်ဒါနဲ့ Pm က ယူဇာနိမ်းကို ကလစ်နှိပ်ရင် ဘာလေးကျလာတယ်။ အဲဒီထဲမှာရှိတယ်။
ပုံကိုကြည့်ရတာ Soung , SCSI နှစ်ခုလုံးမှာ error ရှိနေပုံရတယ်..
Soung,Priter နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Driver backup လုပ်ဖို့ မကြိုးစားတာကောင်းပါတယ်..
BIOS setting ထဲမှာ Audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုရှာပြီ ပြင်သင့်တယ်..
ဥပမာ AC 97 Audio စသည့်ဖြင့်ပေါ့၊
တစ်ချို့ကလဲ Sound ပိုင်ဆိုင်ရာ Driver (Realtek High)တွေသီးသန့်သုံးကြပါတယ်...
On board ဆိုရင် Dirver တမျိုးမျိုးနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ... အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်...
XP SP2 CDတွေ မှာ Sound Dirver တွေပါတက်ပါတယ်...
Windows XP SP2 2006( V.5, I 3012) စတဲ့အခွေတွေမှာ Build in ပါနေတက်ပါတယ်..
System Board ပေါ်က Soung အပေါက်နာမှာအနီးဆုံး IC ပေါ်က အမည်နဲ့ နံပါတ်တွေ
ဖြစ်ပါတယ်... စမ်းသပ်ကြည့်ပါ ရနိုင်ပါတယ်...
mother board driver card မရှိဘူးလားဗျ... အဲမှာ ပါတယ်ဗျ... Mother Board Driver CD ကို ထည့်လိုက်ရင် Auto Run မှာ sound အတွက်ပါတယ်လေ.... ဒါမှမဟုတ် driver update မှာ mother board driver က sound driver ရှိတဲ့ path ကိုညွှန်လိုက်ရင် ရပါတယ်..
sp3　မှာ outlook express မပါ ဘူး ခင်ဗျ။
microsoft outlook ကို လည်း မသုံးချင်ဘူး( ဟီး မ သုံး တတ် လို့)
outlook express6ကို download လုပ် တာ အခု internet explore version နဲ့မကိုက်ဘူး ဆို ပြီး
error တက် နေ တယ် ကူညီပေးကြပါ။:((
မိတ်ဆွေ သုံးနေတာ sp3 မဟုတ်လောက်ဖူး။ SP2 ကို ပြန်ပြီး edit လုပ်ထားတဲ.ဟာပဲဖြစ်မယ်။ Intnernet Explore7ကို Update လုပ်ပြီးစမ်းကြည်.ပါလား။ တကယ်လို. အဆင်မပြေလို. ဒီ Windows ကိုပဲဆက်သုံးခြင်တယ်ဆိုရင်တော. တခြာ Email Client Software လေးသုံးကြည်.ပါလို. အကြံပေးပါရစေ/
မိတ်ဆွေကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားသော Client Software တွေလဲရှိပါသေးတယ်။
မိတ်ဆွေရဲ. Motherboard က MSI series ဆိုရင်တော. ဖြစ်တက်တယ် Sound Driver Update လုပ်ရင် Wizard box ကပေါ်မလာဘူး။ ကျွန်တော်လည်းကြုံဘူးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော. Windows ပြန်တင်ပြီးကို ပြန်စမ်းတယ်။ သူက VGA Driver ကို အရင်တင်ပြီးမှ Sound Driver ကို တင်ရင်အဲဒါမျိုးဖြစ်တာပဲ။အကောင်းဆုံးကတော. Sound Driver ကို အရင်တင်စေခြင်တယ်။ပြီးမှ VGA Driver ကိုတင်စေခြင်တယ်။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်စမ်းကြည်.စေခြင်ပါတယ်။ ဒီ Error က M/B CD ကနေ Sound Driver Install လုပ်ရင်လဲမရပါဘူး။ ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာလေးပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
ဒါမှမရရင်တော့ ဆားဗစ်စင်တာသွား ... ဖို့ဘဲကျန်တယ်ဗျာ။
ခေတ္တ ကာဖရိအ ရောက်နေတဲ့
ကျေးဇူးပါပဲ ဗျာ .... really thz for reply me
March 2008 edited March 2008 Moderators
အစ်ကိုကြီး Zulu အဆင်ပြေနေပြီလား
စက်က p3 အထိ older onboard sound device တွေအတွက်ဆိုရင် driver တွေရှာရတာမလွယ်ဘူးဗျ..
p4 ကနေ ဆိုရင် အခုထိဆိုရင် ရှာရတာတော်သေးတယ်..
ကျွန်တော့ဆီမှာ တော့ older onboard sound device တွေအတွက် နိုင်သလောက်စုထားတာတွေတော့ရှိတယ်..
Download Center မှာ တင်တာ error ဖြစ်နေလို့gtalk ရှိရင် တိုက်ရိုက်ပို ့ပေးပါ့မယ်...
ဟုတ်ပါတယ်... အစ်ကိုကြီးမှာ ရှိရင် မျှပေးပါအုံး၊(XP English version original windows)
အင်္ဂလိပ်ဝင်းဒိုးကနေ တရုတ် interface ပြောင်းတာကိုပြောတာမလား။
ဆာဗာ ကနေ 24 နာရီ မ run ဘူး။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ခနသုံး ဆာဗာဖြစ်နေလို့
ကျွန်တော် လိုချင်တာက windows xp eng version org CD ပါ..
ကျွန်တော့်မှာ untouch version ရှိတယ်ထင်တယ်၊ OEM လားမသိဘူး။
အိမ်ရောက်မှ တင်ပေးမယ်နော် စောင့်ဦး:67:
နောက် ForumW.org မှာလဲ ရှာလို့ရတယ်ဗျ အဲဒီအထဲက စိတ်တိုင်းကျတဲ့ ဟာတစ်ခုတွေ့ရင်လဲ ပြော ပြန်တင်ပေးမယ်။
ဥပမာ။ ။ ဟင်းရည်သောက် တစ်ခွက်ချက်မယ်ဆိုရင်၊ P4 ဆိုတဲ့ ထမင်းချက် ဟာ၊ အိုးထဲရေထည့်ခွင်ပေါ်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။
အိုးအပူပေးနေတုန်း၊ ဟင်းရွက်တွေကိုဖျင်ပါတယ်၊ ဖျင်နေတုန်းခနရပ်၊ ကြက်သွန်ကို လှီး၊ ပြီးရင် ဟင်းရွက်ဆက်ဖျင်၊ အိုးဆူလာတော့၊
ဟင်းရွက်ဖျင်တာကို ရပ်၊ အိုးထဲကို ဟင်းမျိုးခတ်လေးထည့်။ ပြီးတော့ ငါးကိုခုတ်၊ ဟင်းရွက်ဖျင်၊ ကြက်သွန်လှီး၊ ဒီလိုနဲ့ အချိန်နည်းနည်းစီပိုင်းပြီး၊
လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ရှေ့ကနေ၊ ဆွမ်းတော်ဗျို့လို့အော်တော့၊ လုပ်လက်စအလုပ်တွေချထား၊ ဇလုံယူ၊ ထမင်းခူး၊ အိမ်ရှေ့ကိုပြေး၊
ဆွမ်းလောင်း။ (အလုပ် တစ်ခုကနေ တစ်ခုကိုပြောင်းလုပ်ရပါတယ်။) ဒီလိုနဲ့ဟင်းရည်သောက် တစ်ခွက် ဟာ အချိန် အတိုင်း အတာ တစ်ခု
ဆိုကြပါစို့ မိနစ် သုံးဆယ် ဆိုရင်ကျက်ပါလေရော။
ယခင်က ထမင်းချက် P2 ချက်ရင်၊ လုပ်တာကိုင်တာ နှေးလို့၊ ၁ နာရီကြာမှာ ကျက်ပါတယ်။ ဆရာတော်လည်း အိမ်ရှေ့မှာ တော်တော်
ကြာအောင် ရပ်စောင့်နေရပါတယ်။ ဟော P3 ကျတော့ မိနစ် လေးဆယ်လောက် ကြာမှ ဟင်းကျက်ပါတယ်။ ဆရာတော်လည်း သိပ်
မစောင့်ရဘူးပေါ့။ P4 ကတော့သွက်သွက်လက်လက်နဲက အဆင်ကိုပြေလို့။ ဒီနေရာမှာ အဓိကပြောချင်တာက၊ အလုပ်တစ်ခု ကို လုပ်နေတဲ့ခါမှာ
အလုပ်ငယ် တစ်ခုပြီး တစ်ခုကို အချိန်ခွဲပြီး ဆက်တိုက်လုပ်နေရတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်တည်းရှိတာကိုး။
အလားတူပါပဲ Pentium-4 Processor ဟာ Windows ပေါ်မှာ သင်ဖွင့်ထားတဲ့ Music ဖိုင်ကို Play လိုက်၊ GTalk မှသူမှာ ပို့တဲ့Message ကိုစစ်လိုက်၊
ဖွင့်ထားတဲ့Photshop မှာ သင်ဆွဲသမျှလုပ်လိုက်နဲ့ အချိန်ကို ပိုင်းပြီး၊ ဆက်တိုက် အလုပ်ငယ်လေးပေါင်းများစွာကိုလုပ်ရင်း၊ တစ်ခုထက် ပိုတဲ့
အလုပ်တွေ ကိုလုပ်ပါတယ်။ 2.4 GHz ရှိတဲ့ P4 ဟာ ၂.၄ ကုဋေ အမြန်နှုန်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တာဖြစ်လေတော့၊ အလုပ်တစ်ခု (အလုပ်ငယ်လေးများစွာ)
ကို Micro Second (တစ်စက်ကန့်ရဲ့ အပုံ တစ်သန်းပုံတစ်ပုံ) နှုန်းထားနဲ့ပြီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မြန်လှပါပြီကောဆိုတော့
လုံလောက်ပါပြီဆိုရင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ ကုမ်ပဏီတွေ ဒါလောက်နဲ့မကျေနပ်ဘဲ။ ဒီထက်မြန်တာကိုရဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နာရီ၀က်မစောင့်နိုင်လို့ ဆယ့်ငါးမိနစ်နဲ့ ဟင်းကျက်အောင်၊ နောက် P4 ထမင်းချက် တစ်ယောက်ကိုထပ်ငှားလိုက်ပါတယ်။
ကဲ အခု ထမင်းခက်နှစ်ယောက်ရပြီ။
အဲဒီတော့ တစ်ယောက်က အိုးတည်ရင်၊ တစ်ယောက်က ဟင်းရွက်ဖျင်၊ အိုးတည်ပြီးတဲ့တစ်ယောက်က ကြက်သွန်လှီး။ ဆွမ်းခံလာရင်၊
တစ်ယောက်ကသွားလောင်း၊ ဟင်းချက်လည်းမပျက်၊ ဆွမ်းခံလည်းအချိန်မီ။ ဆယ့်ငါးမိနစ်နဲ့ ဟင်းကျက်ကရော။
(အခုပေးတဲ့ ဥပမာ ကို Multi-Core မဟုတ်ပဲ Multi-Processor ကြီးပဲလို့ ငြင်းကောင်းငြင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ်
ဆွေးနွေးချက် ဟာ Multi-Core အကြောင်းသာဖြစ်လို့ သည်းခံကြပါ။)
ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်နှစ်ယောက်ငှားသလိုပါပဲ။ ယခင် Processor တစ်လုံးထဲမှာ Processing Unit နှစ်လုံးကို ထည့်ထားလိုက်ရင်
Duo Core, လေးလုံးထည့်ထားရင် Quad Core လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အလုပ်တစ်ခုပြီးဖို့ အလုပ်ငယ်လေးတွေများစွာကို အချိန်ပိုင်းပြီး လုပ်ရတယ်။ လူများလာရင် အလုပ်တစ်ခုကပိုပြီးမြန်မြန်ပြီးမယ်။
ဒါ့ပြင် အလုပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း လူခွဲလုပ်ရင် ပိုမြန်လာမယ်။
Multi-core ရဲ့လိုရင်းကို အဲသလို နားလည်ပါတယ်။
အကယ်လို့ ဘယ်ထမင်းချက် ကို မင်းကတော့ ဘာပဲလုပ်၊ နောက်တစ်ယောက် ကတော့ ဒါပဲလုပ် စသည်ဖြင့် သီးခြားခိုင်းချင်ရင်တော့
Windows XP (+ DuoCore machines) တွေမှာ ဒီလိုလုပ်ပါ။
# Open Task Manager.
# Click the Processes tab.
# In the left column, find the process you want to assign (for example, WinWord.exe for the Word program).
# Right-click it and choose Set Affinity.
# By default, both cores will be checked. Check only the core (CPU) you want the process to run on (CPU0 or CPU1).
# Click Ok. This can be useful if you want to keep one processor free for use byaparticular program, or if you're running older applications that don't work as well with multiple processors.
နောက်များမှ ဆက်လက် လျှာရှည်ပါမည်။